Yintoni urhulumente wasekhaya? – Civics Academy
Yintoni urhulumente wasekhaya?
Urhulumente wasekhaya ngomnye wamacandelo amathathu karhulumente kunye namacandelo ephondo kunye nakazwelonke. Urhulumente wasekhaya unoomasipala, owenza uninzi lwezi nkonzo ezisetyenziswa ngabantu kubomi babo bemihla ngemihla. UmGaqo-siseko unika iindidi ezintathu zikamasipala, oko kukuthi, ezasezidolophini, ezezithili kunye noomasipala basekhaya. EMzantsi Afrika, kukho oomasipala abangama-278, abasezidolophini abasi-8, abangama-44 bezithili kunye noomasipala basekhaya abangama-226.
UmGaqo-siseko ucacisa ngokuphandle umsebenzi wecandelo ngalinye likarhulumente kwiiShedyuli yesi-4 neyesi-5. Imisebenzi kaRhulumente waseKhaya idwelisiwe kwiZahluko zeShedyuli nganye. Onke amacandelo makaququzelele imisebenzi yabo. Urhulumente kazwelonke nowephondo makabelane ngoxanduva lwemisebenzi edweliswe kwiShedyuli yesi-4, umzekelo, kwinkonzo yobupolisa kunye nezolawulo lweentlekele. Urhulumente wephondo unoxanduva olulodwa lwemisebenzi edweliswe kwiShedyuli yesi-5, umzekelo, iinkonzo ze-ambulensi kunye neenkonzo zephondo. Umkhosi wezokhuselo nemfundo yaseyunivesithi, umzekelo, ngumsebenzi oluxanduva olulodwa karhulumente kazwelonke.
Ngawo omathathu amacandelo abelana ngemisebenzi kunye noxanduva, kwimisebenzi ethile, umzekelo, “ezezindlu”. “Ezezindlu” zidweliswe njengomsebenzi oluxanduva ekwabelwana ngawo phakathi kukarhulumente kazwelonke nowephondo. “Iinkonzo zamanzi nezococeko” zidweliswe njengomsebenzi karhulumente wasekhaya kodwa kudweliswe njengenxalenye yokuphunyezwa kwezindlu. Umbane, ukuthuthwa kwenkunkuma, iipaki neendawo zolonwabo nezoluntu yinxalenye yezinye zezinye iinkonzo ekufuneka ukuba urhulumente wasekhaya azenze.
Oomasipala balawula ngamabhunga ezasekhaya anyulwa ngenkqubo yonyulo loomasipala basekhaya. Umsebenzi wabo wenziwa ngabezolawulo lukamasipala. Uluntu lunelungelo nomsebenzi wokuthatha inxaxheba ekwenziweni kwezigqibo zikamasipala ngokusebenzisa iikomiti zeewadi, iintlanganiso zothatho-nxaxheba loluntu, ukungeniswa kweengcaciso-ntetho ezibhaliweyo nezindululo kunye noqhagamshelwano ngqo nooceba.